Gasho wajiga wajiga guriga, u qaybi kuwa kale sidoo kale: PM ilaa BJP
NEW DELHI: Raiisel wasaare Narendra Modi wuxuu ka codsaday darajada iyo feylka BJP in loo qaybiyo waji uyaraan ugu yaraan 5-7 qof oo xitaa lagu xidho guriga, hadii ay macquul tahay. Isagoo kula hadlaya kaadirka BJP iyada oo loo marayo xiriiriyaha fiidiyowga maalinta aasaaska 40aad ee xisbiga Isniinta, Modi wuxuu shan codsi u gudbiyay xubin kasta. Wuxuu emp ...
Maaskarada-xidhashada, fogaanshaha bulshada waa in si adag loo dhaqan galiyaa:
New Delhi: Wasaaradda arrimaha gudaha ee Midowga waxay khamiistii sheegtay in qawaaniinta qaar sida xirashada wejiga, wajiga barashada bulshada iyo isku imaatin la'aanta shan qof ama in ka badan ay tahay in si adag looga dhaqan geliyo goobaha dadweynaha si loo hubiyo in xirida la xakameeyay faafitaanka cudurka coronavirus. waa implem ...
Maharashtra wuxuu mamnuucayaa ka bixitaanka guriga iyadoo aan la helin maaskaro
Xukuumadda Maharashtra ayaa soo saartay amar Arbacadii ka mamnuucaya dadka inay ka baxaan guryahooda iyagoo aan lahayn waji daboolan, horumarkaas oo yimid ka dib markii uu ku batay tirada kiisaska la xaqiijiyay ee Covid-19 ee magaalooyinka sida Mumbai iyo Pune. Amarka waxaa markii ugu horeysay soo saaray dowladda hoose ee Mumbai ...
Farshaxanka Banksy wuxuu helayaa isbeddel; 'Gabar Dhago Daran
LONDON: Banksy “Gabar leh Eardrum Dulli leh” ayaa loo cusbooneysiiyey xilligii coronavirus iyadoo lagu daray maaskaro buluug ah oo qalliin lagu qurxiyo. Mural-ka, oo ku saabsan farshaxanka reer Holland ee Johannes Vermeer “Gabadh Dhego Dheer leh”
Chandigarh: Kuwa laga helay iyagoo aan wajiga wajiga ka haysan goobta dadweynaha
Qof kasta oo lagu helo isagoon weji qarsanaynin meel fagaare ah waa la xiri doonaa, maamulka Chandigarh ayaa sheegay amar ay soo saareen Khamiista. Maamulka UT Talaadadii wuxuu qasab ka dhigay dadka inay xirtaan waji-furka goobaha dadweynaha si loo hubiyo fiditaanka cudurka coronavirus. Sida ku xusan amarka la soo saaray ...